Roulette amin'ny casino an-tserasera, eoropeana ary amerikana
15 MAZAVA MAIKA
Milalao ny angovo Casino
Roulette dia kisary filokana amin'ny filokana ary ny mpanjakavavin'ny lalao manerana izao tontolo izao. Mandra-pahatongan'ny fidirana ao amin'ny casino dia maheno feona manipy isika, izay avy eo dia latsaka amin'ny sehatra tokana misy ny kodiarana mihodinkodina, manome hafaliana ho an'ireo mpandresy ary mitresaka ny ranomaso farany sy ny vola avy amin'ny valin'ny fandavoana.
Tantara momba ny Roulette
roulette dia iray amin'ireo kilalao tranainy indrindra amin'ny miloka. Ny dikan-teny voalohany noforonina tao amin'ny 1645. Dia roulette fotsiny io. Roa karazana roulette no tokony horesahina eto - ny rafitra eoropeana sy amerikana. Ny dikan-teny amerikanina dia noforonina tamin'ny taonjato faha-19 (aorian'ny 1842 fanampiny dia nampiana roulette tao 0 ary antsoina hoe roulette eoropeana ny rafitra.
Inona no maha samy hafa ny dikan-tany eoropeana sy ny dikan-teny amerikana? Ao amin'ny roulette amerikana, ny mpilalao sy ny casino dia manana sehatra iray hafa an-tsakany sy andavany - nampidirina ny sehatra 00. Ity dia mifandray amin'ny bonus sy fitsipika maro, isaorana izay ahafahantsika mampitombo ny fandresena na mampitombo ny faharesena. Ireo manam-pahaizana momba ny Roulette anefa dia milaza fa ny dikan-teny amerikanina dia sarotra kokoa ary noforonina fotsiny mba hahazoana antoka Casino alohan'ny fandresena manaitra ny mpilalao. Azo inoana fa mandresy amin'ny sehatra sy fitsipika fanampiny American Roulette dia kely kokoa noho ny rafitra eoropeana - noho izany ny mpilalao mahay izay mitoky afa-tsy amin'ny vola lehibe manitsaka amin'ny roulette eoropeana (izay, tamin'ny 1842 dia noforonina ihany koa mba hiarovana ny trano filokana, i.e. casino, amin'ny fandresena).
Manao ahoana ny lalao?
Ireo mpilalao dia mijanona eo amin'ny latabatra lehibe misy isa sy kodiarana lehibe. Rehefa mijanona ny latabatra ekena (eken'ny mpivarotra, izay tompon'antoka amin'ny fametrahana ny kodiarana ihany koa), dia manomboka miasa ny mpivarotra. Voalohany dia nirohotra namela baolina kely iray nampiditra teo ny kodiarana rehefa afaka kelikely. Ny baolina dia mihodina amin'ny lafiny mifanohitra amin'ilay kodiarana, ary avy eo miaraka amin'ny famotsorana mihodina dia mianjera amin'ny iray amin'ireo saha maro. Ny sehatra dia maneho isa sy loko. Ny mpilalao dia afaka manome tarehimarika isa, isa marina (tena atahorana) na loko. Izy io ny loko izay matetika no voafantina mpilalao - rehefa avy eo, manana ny salanisa 50: 50. Ny tsy mampivily ihany dia ny fitarihan'ny tanimbary 0, rehefa vitan'ny casino ny vilany mandra-pahatongany amin'ny fihodinana manaraka.
Betsaka ny rafitra lalao lalao roulette. Ny baiko malaza indrindra amin'ny famatsiam-bola kely sy ny fampitomboana avo lenta ny filokana, ary mifidy loko iray ihany. Ny paikady hafa dia mitaky anao amin'ny filokana amin'ny laharana voafaritra ihany. Miasa ity, nefa mitaky ny handrindrana ny lalao tsy tapaka ny mpilalao. Ny fahadisoana iray dia ampy hanary vola be.